အီသန်ဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
အရှေ့မြောက်ပိုင်းထိုင်း၊ ထိုင်း၊ ထိုင်းအီသန်၊ လာအိုအီသန်၊ လာအို (ခေါ်ဆိုနေကြ)
အီသန် and adjacent portions of northern and eastern Thailand. Also ဘန်ကောက်.
Isan (Tai Lao), second language of Khmer Surin, Kuy, Phuthai and speakers of other minority languages of Northeastern Thailand.
22 million (L1 and L2)
အီသန် (သို့) အရှေ့မြောက်ထိုင်း ( ထိုင်း: ภาษาอีสาน, ภาษาไทยถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาษาไทยถิ่นอีสาน, ภาษาไทยอีสาน, ภาษาลาวอีสาน ) မဲခေါင်မြစ်ပေါ်ရှိ လာအိုစကားပြောကမ္ဘာ၏နိုင်ငံရေးပြိုကွဲအပြီးတွင်ဘယ်ဘက်ကမ်းခြေသည်ခေတ်သစ်လာအိုနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Isan ဒေသ (ညာဘက်ကမ်းရိုးတန်း) ဖြစ်လာသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ လာအိုဘာသာစကား ၏ဒေသဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ (၁၉၃၂ မတိုင်မီ) ၁၈၉၈ ဖရန့်စီယမ်စစ်ပွဲ၏နိဂုံးပြီးနောက်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏အဘိဓာန်လာအိုကိုလာအိုဘာသာစကားအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။  လာအိုဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သော Isan သည် Kra-Dai ဘာသာစကားမိသားစု၏အနောက်တောင်ပိုင်းဌာနခွဲ၏လာအို - ဖွတ်ဟိုင်းဘာသာစကားသည်၎င်း၏မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သောလာအိုနှင့် ဖူဟိုင် နှင့် တိုင် ကဲ့သို့သောလူမျိုးစုမျိုးနွယ်စုဘာသာစကားများနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်။ yo Isan ကိုထိုင်းဘာသာစကားအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည်မှာထိုင်းအစိုးရကထိုင်းနိုင်ငံနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သောအနောက်တောင်ပိုင်းဘာသာစကားဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် Chiang Saen ဘာသာစကားများအတွင်းတွင်ရှိသည်။ ထိုင်းနှင့်လာအို (Isan အပါအ ၀ င်) သည်အပြန်အလှန်နားလည်နိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည် ၈၀% သောဝေါဟာရများကိုဝေမျှသော်လည်းလာအိုနှင့် Isan တို့တွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော tonal ပုံစံ၊ သရအက္ခရာအရည်အသွေး၊ စကားပြောဆိုပုံနှင့်ထိုင်းနှင့်ကွဲပြားသောအသုံးများသောစကားလုံးများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကြိုတင်ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအချင်းချင်းနားလည်သဘောပေါက်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်
↑ ၁.၀ ၁.၁ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. (2011). Reports submitted by States parties under article9of the Convention: First to third periodic reports of States parties due in 2008, Thailand. (GE.11-46262 (E) 141011 181011). New York NY: United Nations.
↑ Nidhi Eoseewong (2012-11-12)။ ภาษามลายูถิ่นในประเทศไทย [Malay dialects in Thailand] (in Thai)။ Selected Messages & Good Article for People Ideas and Social Justice။ 2014-07-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nordhoff၊ Sebastian; Hammarström၊ Harald; Forkel၊ Robert; Haspelmath၊ Martin, eds. (2013)။ "Northeastern Thai"။ Glottolog။ Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီသန်ဘာသာစကား&oldid=563623" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၇:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။